China Ladies makiazy lena sy maina lasitike lasitike spaonjy spaonjy mpanamboatra sy mpamatsy | Dongmei
Vehivavy makiazy atody spaonjy mando sy maina
Dongshen matihanina spaonjy blender blender, mahafatifaty mitete mavomavo endrika, latex-maimaim-poana sponjy blender blender dia vita amin'ny PU, azo ampiasaina ho an'ny maina sy lena, ny makiazy dia marefo ary marevaka amin'ny hoditra, tsy misy mahasosotra ny hoditra.
● SERVICE FAHAFAHANA 100%: ny lasitra fanosorana spaonjy no Makeup no safidinao tsara indrindra.Raha mahita olana na sosokevitra momba ny mixeur spaonjy spaonjy izahay dia aza misalasala mifandray aminay, hanome fanampiana sy serivisy matihanina izahay mandritra ny 24 ora.
Karakarao ireo “olana iraisana”:
- Arotsaho ny spaonjy ary potsero ny rano be loatra alohan'ny hametrahana fototra misy ranoka.
- AZA apetaho mivantana amin'ny spaonjy ny fototra! Fa kosa, asio teboka eo ambonin'ny tavanao ary avy eo ampiasao ny spaonjy mba afangaro.
- AZA ampiharina amin'ny fihetsiketsehana boribory. Kitiho kely na atositosika eo amin'ny tavanao hahavitana mahavariana sy malefaka.
- Soloy isaky ny 3 volana ny fitroarana tsara indrindra, sorohy ny fihanaky ny bakteria.
Teo aloha: Professional apricot fizarana tarehy tarehy sponjy blender blender
Manaraka: Miorina ara-tontolo iainana lasantsy malemy paika malemy hoditra, spaonjy hatsaran-tarehy spaonjy blender
Fitaovana borosy makiazy, borosy makiazy napetraka, Manaova borosy, Faritra fiharatra, Mametraha makiazy borosy, Barber Shave,